Indlu yelizwe kwifama eqinisekisiweyo ehlala kwindawo entle kumaphandle angqonge iPiacenza - isixeko esikumantla e-Itali.
Umlambo okufutshane weTrebbia ukrola indlela yawo kwintlambo yeTrebbia phakathi kweenduli zePiacenzian eziqengqelekayo. Lo mhlaba ukhuthazayo wase-Italiya kunye neenqaba ezilinganayo kunye neelali ezisasazeke kuyo yonke indawo zibonelela ngamathuba amaninzi okuhamba, igalufa, ukubona indawo, ukuqubha okanye ukuphumla nje.
I-apartament ikhaphukhaphu kwaye inemibono ngaphandle kweendawo ezintle eziqinisekisiweyo zezinto eziphilayo. amagumbi okuhlambela abucala kunye nendawo yokuhlala ngokunjalo. I-apartament ihonjiswe kwisitayela selizwe laseNtaliyane, kunye nokongezwa kwezinto ezithuthuzelayo zanamhlanje.
Ngaphandle kukho i-porticate ebanzi apho unokuchitha ixesha kwaye uphumle, igadi kunye nawo onke amasimi kunye namatyholo ajikeleze iihektare ezingama-20 zefama.
Ijografi engaqhelekanga yentlambo, phakathi kolwandle lwaseLiguria kunye neentaba zeLigurian Apennine, sesinye isizathu sokuba ingabikho kuluhlu lweendawo zokuchithela iiholide zase-Italiyane. Ukuba kude kunye nokusendle kwentlambo kungundoqo wobudlelwane bentiyo yothando abantu abaninzi ekufuneka bajongane nayo xa behlala okanye bechitha iiholide zabo apho; ubuhle kunye nokucoceka kwehlathi, kunye nemithi yabo yepine kunye ne-chestnut, iindlela zokuhamba ezinzima ezikhokelela encotsheni yeentaba ezizimeleyo kunye nombono phezu kwentlambo eluhlaza kunye nemijelo yomlambo engezantsi, zezinye zezinto ezikhangayo kwimimoya yothando ekufuneni ukuba wedwa kunye negumbi lokucinga.
Inkcubeko kunye nabathandi bezobugcisa banokundwendwela iinqaba eziziindwendwe, ii-abbeys ezithe cwaka kunye nebhulorho yaseRoma yase-hunchback kwiidolophu ezinjengeRivalta kunye neBobbio. Kubonakala ngathi u-Bobbio uPonte Gobbo wayeyibhulorho ngasemva kwe-Mona Lisa edumileyo yokudweba nguLeonardo da Vinci.
abahambi abanakuzinceda kodwa bathandane nenye yeentlambo zokugqibela zase-Italiyane, iperile elinde ukufunyanwa lihlabathi liphela okanye, ubuncinci, ngabo bafuna iparadesi yokwenyani nengonakaliswanga elahlekileyo.
Ipropathi isoloko ifumaneka kwindawo yokucebisa ukutya okugqwesileyo kunye neendawo zokuphumla macala onke, iiseli zewayini ezithandekayo ukuya kutyelela, iicastels ezintle zeDukate okanye i-borgous efana negrazzano visconti, vigoleno, castell'arquato kunye ne-bobbio ezithandwa kakhulu. vala . Kwakhona ukufumanisa i-trebbia yomlambo kunye nazo zonke iindawo zendalo zokuhamba
Ipropathi isoloko ifumaneka kwindawo yokucebisa ukutya okugqwesileyo kunye neendawo zokuphumla macala onke, iiseli zewayini ezithandekayo ukuya kutyelela, iicastels ezintle zeDukat…